नेपाल आज | माओवादीको पक्षमा काम गर्ने एमालेभित्रका कालकुट झलनाथ र माधव हुन् (भिडियोसहित)
विचार भिडियो इतिहास र अनुभूति
माओवादीको पक्षमा काम गर्ने एमालेभित्रका कालकुट झलनाथ र माधव हुन् (भिडियोसहित)
सोमबार, ०९ साउन २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
डा. सुरेन्द्र केसी राजनीतिक विश्लेषक
नेपालका राजनीति दलहरु विशेषतः सत्ताको लागि जे पनि गर्छन् । नैतिक अनैतिक यिनीहरुलाई मतलव छैन । सम्झौता गर्न नहुनेसँग पनि सम्झौता गर्छन्, जान नहुने ठाउँमा पनि जान्छन्, गर्न नहुने पनि गर्छन्, सत्ता प्राप्त हुन्छ भने यिनीहरुले जस्तो जस्तो पनि गर्न तयार हुन्छन् । अब चुनाव गराउनु पर्ने छ । आउँदो आठ महिनामा दुई चरण र स्थानीय तहको बाँकी चुनाव गराउनु पर्ने छ । तर यिनीहरुले त्यसो गर्दैनन् । एक वर्ष संसदको म्याद थप्छन् । त्यही खेल हो जस्तो लागि रहेको छ । यसका लागि प्रतिपक्षी एमाले पनि तयार हुन्छ । ६०१ त मख्ख पर्ने नै भए जागिर एक वर्ष थमौती हुँदा । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दुवै पनि मख्ख पर्ने भइगए । संघीय संसदको चुनाव हुनेबित्तिकै नयाँ राष्ट्रपति आइहाल्छन् । यसो हुँदा अबको खेल त्यो होला जस्तो लागेको छ ।
जसले नेपालको राजनीतिलाई हातमा लिएर नेपालीको भाग्य सिध्याउने खेल गरिरहेको छ तिनीहरुका लागि पनि यो लाभदायक हुन्छ । अव्यवस्था र अस्तव्यस्ततामा नेपाललाई बढाउँदै लैजाने र अन्तिममा भीरबाट खसाउने योजना संसदको आयु बढ्यो भने पूरा हुन्छ ।
७० लाख युवाहरु विभिन्न देशमा पुगेका छन । उच्च तापक्रममा नेपाली युवाहरु खाडीमा पसिना चुहाइरहेका छन् । दैनिक १६ सय नेपालीहरु कामको खोजीमा विदेशिन्छन् । ८–१० वटा शवका बाकस नेपाल भित्रिन्छन् दैनिक । ती युवाहरुको चाहना यस्तो अस्तव्यस्त राजनीति होइन । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने, डेमोक्रयाट भन्नेहरुले ती युवाहरुको चाहना बुझेर काम गर्न सक्नु पर्ने हो । तर गरिरहेका छैनन् । यिनीहरुको व्यभिचारपूर्ण राजनीति छ । स्वार्थी सबै हुन्छन् । तर राजनीति गर्ने, राजनीतिक दलका नेतृत्व गर्नेहरु क्षणिक स्वार्थमा फस्दा सबै जनताको भाग्य हरिन्छ ।
अहिलेको राजनीति गठबन्धन बाहिरी शक्तिले बनाइदिएको हो । विदेशी शक्तिका कार्यकर्ता हुन् यिनीहरु । नेकपा एमालेको लोकप्रियता कायम रहेसम्म यिनीहरुको गठबन्धन जारी रहन्छ । अब २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा पनि एमाले नै अगाडि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा यो एमालेलाई सिध्याउन त्यो पार्टी भित्रका कालकुटहरु परिचालन हुन सक्छन् । पार्टी नै फूटाउन पनि सक्छन् । एमालेभित्र बसेर अरु पार्टीको सेवा गर्ने झलनाथ र माधव नेपाललगायत कालकुटहरु छन् ।
नेपालको मिडियामा पनि स्वतन्त्र छैनन् । टेलिभिजन, ब्रोडसिट पेपर सबै प्रायोजित छन् । आफ्नो निहीत उद्देश्य पूरा हुने अवस्थामा मात्रै सूचना सम्प्रेषण हुन्छ । एउटा पुस्तक समिक्षामा पनि प्रायोजन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई फसाउनका लागि मिडियाहरु नै उपयोग पनि हुन्छन् । साझा सवालमा सहभागीहलाई मासुभात खुवाएर, प्रश्न कण्ठ पार्न लगाएर, भत्ता दिएर प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने पनि मिडिया नै हो । यसो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीको शैली, जवाफको स्तर गतिलो थियो भन्न खोजेको होइन ।
मलाई कतिपयले हिजो आज एमाले पक्षधर भएको आरोप पनि लगाउँछन् । तर गुण र दोषका आधारमा म कसैलाई समर्थन र कसैलाई विरोध गर्छु । हिजो केपी ओलीले भारतले एकातर्फी रुपमा नाकाबन्दी गरेर एक खाले युद्ध नै नेपालविरुद्ध गरेको थियो । त्यो बेला देशको प्रधानमन्त्रीले जे जे बोल्नु पर्ने हो, जे जे गर्नु पर्ने हो त्यो गरे । समर्थन गरेँ । अहिले पनि उनको अडान ठिक लाग्छ । तर यता हेर्नुहोस त काठमाडौंमा विद्यासुन्दर शाक्यको तरिका । एमालेले विद्यासुन्दरलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउँदा सबै हिसाबले असल मान्छेलाई मेयर बनायो भन्ने सोचेँ । तर अहिले त विषय ठीक उल्टो भएको छ । आफ्नै लागि मोबाइल किन्ने, कर लगाउने पो गर्न थाले । स्कुले बच्चा नालीमा डुब्दा त्यसको जिम्मेवारी समेत उनले लिएका छैनन् । महानगरको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्न थालिसकेका छन्। मोबाइलको निर्णय फिर्ता लिएको भनिएको थियो । भित्रबाट खाइसके भन्ने बुझेको छु ।
(डा. केसीले भिडियो अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारका आधारमा)